AL-qaacidada AN-Nusra eedagaalanta gudaha Suuriya oo siideysey 16 qof kuwaasoo u dhashey dalka Lubnaan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com AL-qaacidada AN-Nusra eedagaalanta gudaha Suuriya oo siideysey 16 qof kuwaasoo u dhashey...
Kooxda An-Nusra oo ka dagaalanta dalka Suuriya, isla markaana xiriir la leh Al-Qaacida ayaa sii daysay maanta 16-askari oo dalka Lubnaan u dhashay, taasoo qeyb ka ah heshiis maxaabiista lagu kala wareegsanayo oo ay fududeysay xukuumadda Qatar.
Mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Lubnaan ayaa warbaahinta wararka wadanka Lubnaan ayaa sheegay inay is-weydaarsiga maxaabiista ay ka socota magaalada Arsal oo ka tirsan dalka Lubnaan oo ku dhow xadka u dhexeeya waddamada Suuriya iyo Lubnaan.
Xoogaga kooxda An-Nusra ayaa 25-askari oo ka tirsan ciidamada dalka Lubnaan waxay ku qafaasheen weerar ka dhacay bishii August ee 2014-kii; magaalada Arsal oo Waqooyi-bari dalka Lubnaan ku taalla.
Sidoo kale, kooxdan ayaa dilay 10 askari intii uu socday weerarka; iyadoo dagaalkaas uu qarxay kaddib markii kooxdan An-Nusra ay ka caroortay nin u dhashay dalka Suuriya oo ka tirsan oo xukuumadda Lubnaan ay xabsiga dhigtay.
Dhanka kale, maxaabiis is-dhaafsigan ayaa wuxuu qayb ka ahaa in xukuumadda Lubnaan ay sii-daysay maxaabiis ka tirsan kooxda An-Nusra, iyagoo kooxdu ay sidoo kale dib ugu celisay Lubnaan meydka askari ay horay u dileen.
Ugu dambeyn, Kooxda An-nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa waxay askartaan gacanta ku hayeen 16-kan askari oo u dhashay dalka Lubnaan in ka badan lix iyo toban bilood.
Previous articleXisbiga midnimada Jamhuuriga soomaaliyeed oo hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanadguurada 1’aad u direy madaxda iyo xubnaha xisbiga DALJIR.
Next articleCiidamada Amisom ee dalka Uganda iyo kuwa D.F.S oo sheegey in ay ururka AL-shabaab ka qabsadeen deegaano hor leh.